हुम्ला र खप्तडमा लगातार हिमपात हुँदा अत्यधिक चिसो — donnews.com
१मलेसियामा ११ सय भन्दाबढी नेपालीको मृत्यु, के हो कारण ?
२लेकसाईडको होटल ड्रिमल्याण्डमा यौनशोषण गर्न लगाएको आरोपमा दुईजना पक्राउ
३एस्ट्राजेनेका खोपको दोस्रो मात्रा आजदेखि
४जसले राजकुमारीको पदवी त्यागेर प्रेमीसँग विवाह गरिन्
५मुजिब र राशिदको घातक बलिङमा अफगानिस्तानको शानदार जित
६आज देशैभर एमालेको पालिका अधिवेशन हुँदै
७छठअघि नै १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तयारी
८थप ७७६ जनामा कोरोना संक्रमण, १३ जनाको मृत्‍यु
९प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘निकास’ दिनपर्छ- बार एशोसिएसन
१०प्रधानमन्त्री देउवाले भने- राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति छिट्टै तोक्छौं
११सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गरे इजलास बहिस्कार
१२काठमाडौंमा ९ गतेदेखि एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाइने, क-कसले लगाउन पाउँछन् ?
जीवन शैली समाचार सुदुर पश्चिम
हुम्ला र खप्तडमा लगातार हिमपात हुँदा अत्यधिक चिसो
सिमकोट । हुम्लामा दुई दिन लगातार हिमपात हुँदा चिसो ह्वात्तै बढेको छ । यो वर्ष जिल्लामा दोस्रोपटक हिमपात भएको छ । यसअघि कात्तिक १८ गते हिमपात भएको थियो ।
जिल्लामा आइतबार र सोमबार दुई दिन लगातार हिमपात हुँदा चिसो बढेको स्थानीय राजबहादुर बोहराले बताउनुभयो । बिहानै तापक्रम माइनस सात डिग्री पुगेको छ । उत्तरी हुम्ला हिमपातले सेताम्मे भएको छ । हिमपातपछि तापक्रम माइनसममा झरेसँगै सदरमुकाम सिमकोटसहित उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा अत्यधिक चिसो बढेको छ ।
मानिसहरु हिउँमा रमाउन थालेका छन् । आइतबार बिहानै हिमपात हुँदा किसान खुशी भएका थिए । जेठासी बाली जौ, गहुँ र उवा छर्ने समयमा हिमपात हुँदा जोत्नलाई सहज हुने भएपछि किसान खुशी भएका हुन् । सोमबार बिहानै हिमपात भएपछि किसानमा खुशीयाली छाएको स्थानीय कमल भण्डारीले बताउनुभयो । लामो समय पानी नपरेकाले जमिन सुक्खा भएर जोत्न कठिन हुने देखिएका बेला यो हिमपातले त्यसलाई सहज बनाउने भण्डारीले बताउनुभयो ।
डोटी । सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीयस्थल खप्तड क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । हिमपात भएसँगै उक्त क्षेत्रमा एकाएक चिसो बढेको छ । आइतबार राति र सोमबार दिउँसो खप्तड क्षेत्रमा हिमपात भएको हो । दुईपटक परेको हिउँले राति र बिहानको समयमा खप्तडलगायत अन्य आसपासका क्षेत्रमा चिसो बढेको हो । हिउँले खप्तडमा डाँडाकाँडा रमणीय भएका छन् ।